SERVO-720 Automatic Servo Cup Kuita Machine - China Guangdong Jinxin Machinery
Cup Kuita Machine
Film anoridza Machine
Kuzadza And Kuiswa chisimbiso Machine
Bottle ichivhuvhuta Machine
HPC Series Automatic Hydraulic Cup Kuita Machine
Yb Series Curved Kushaya Surface Printing Machine
XC Full Automatic High-nokukurumidza Vacuum Achigadzira Machine
SERVO-720 Automatic Servo Cup Kuita Machine
Port: Ningbo kana Shanghai Port
Type / Parameters SERVO-720
Available Material PP, Pe, PET, hudyu, GPPS
Kuvakwa Area (mm) 720 × 450
Kuvakwa Depth (mm) 180
Kuvakwa Speed ​​(zvinogara / Maminitsi) 20-35
Max. Upamhi (mm) 720
Ukobvu (mm) 0.3-2.0
Simba The Whole Machine (KW) ≤ 55
Water Wastage (m3 / h) ≤ 0.5
Divi (mm) 6200 × 2800 × 2600
Thermoforming kurongedza mudziyo zvakadai makapu, mabhokisi uye nembiya. Akadai mukaka mukombe, mondo mukombe, aizikirimu nemikombe, mumwe-kure nemikombe, pakarepo Fried nembiya, mabhokisi zvokudya uye zvichingodaro.
1.The muchina anoshandisa mana mbiru yakarongeka, ane ishande, pasi ruzha, simba clamping simba uye zvichingodaro.
2.Mechanical uye magetsi, gasi kusangana, mukuru-zvakarurama servo kutumira jira, servo ndichinanavira, PLC servo inofamba kuzvidzora, tembiricha kudzora module akangwara hurongwa kuzvidzora.
3.A yakakwirira mwero kushandisa michina, kugadzirwa nokukurumidza. Kuburikidza kugadzwa anoumba siyana zvinogona zvigadzirwa siyana, kuti vabudirire chinangwa Multi pevara muchina.
4.By kushandisa kupinza mufashoni magetsi zvinoriumba, pneumatic zvinoriumba, nechokwadi igadzikane oparesheni, yakavimbika quality, refu upenyu basa.
5.The mamiriro wose tsindirana, kumanikidza, kuumbwa nokuveza, kutonhora, chigadzirwa ichivhuvhuta uye mamwe mabasa panzvimbo imwe chakuvhuvhu, saka kuti chigadzirwa kwacho ipfupi, dzapedza mukuru mugwaro, maererano National mitemo utano.
6.The muchina zvakakodzera pagadzirwe PP, Pe, PET, hudyu, GPPS nevamwe epurasitiki papepa zvigadzirwa. Sewevhu makapu, makate, nemikombe nezvimwe mutete-norusvingo mumidziyo, akadai mukaka nemikombe, mondo nemikombe, aizikirimu nemikombe, kuraswa kunwa makapu, pakarepo noodles mbiya, mabhokisi zvokudya uye zvichingodaro.
Previous: HPC -860 Automatic Hydraulic Cup Kuita Machine
Automatic Cup Kuita Machine
Automatic Plastic Cup Kuita Machine
Cup Achigadzira Equipment
Disposable Cup Kuita Machine
Kunogara Cup Kuita Machine
Zvizere Automatic Cup Kuita Machine
Hydraulic Cup Kuita Machine
Pet Cup Kuita Machine
Plastic Cup Kuita Machine
Plastic Cup Kuita Machinery
mapeji Cup Kuita Machine
Small Plastic Cup Kuita Machine
HPC -860 Automatic Hydraulic Cup Kuita Machine
HPC-720 Automatic Hydraulic Machine For kwemawakaridyara
ASPII110 / RCX700 kusangana pamusoro Sheet Extrusion ...
RCX-700 Automatic Tilt-chakuvhuvhu Cup Kuita Machine
RCX Series Automatic Cam Cup Kuita Machine
Wedzerai: JINXIN Industrial Zone, HuaXinCheng, ChaoShan Road, Shantou City, Guangdong Province, China